Ogaden News Agency (ONA) – CWXO oo gacan bir ah ku haya dhaq-dhaqaaqa shirkadaha Shidaalka ee Shiinaha
CWXO oo gacan bir ah ku haya dhaq-dhaqaaqa shirkadaha Shidaalka ee Shiinaha
Posted by ONA Admin	/ August 28, 2011
Warar dagdag ahoo uu na soo gaadhsiiyay wariyaha noo jooga gobolka Jarar ayaa sheegay in 27/8/2011 ay CWXO weerar ku qaadeen kolonyo baabuur ah oo maraysay wadada laamiga ah agaggaarka Cobole, halkaas oo ay kaga gubeen laba baabuur iyo wixii saaraa halka mid kalena ay naafeeyeen.
Kolanyadan oo gaadhaysay in ka badab toban baabuur ayaa waxay isugu jireen kuwa qaada ciidamada iyo kuwa dagaalka ee tiknikada loo yaqaan.
Wariyuhu waxa uu intaa ku darayaa in ciidankan uu ka mid yahay ciidamada ilaalada gaarka ah ee shirkadda Shiinaha kaas oo mudooyinkanba ku sugnaa wadanka Ogaadeenya.
Wararka waxay intaa ku dareen in dhaawacii iyo maydkiina loo qaaday magaalada Jigjiga uuna awoodi waayay cadawga inuu u sii socdo magaalada Dhagaxbuur oo ay u sii jeedeen markii hore. Lama garan karo in qoladii Shiinaha ay la socdeen iyo inay wax ka soo gaadheen midna. Waxaanan faahfaahinta rasmiga ah ee dagaalkan idiinku soo gudbin doonaa wararka dambe.
الحمد لله ilaahaybaa mahadleh waxaan salaamayaa dhamaan shaqaalaha shabakada ( ONA) iyo dhamaan shacabka sharaftaleh ee reer ogadenia salaankadib ilahay waxaan kabaryaynaa in uugaaladaa nadulmiday ee xaqdarada nagulaysata naga dulqaado inshaa alaahna waxaan ilahay kabaryaynaa soonkan soonkiisa ogadennia oo xor ah ethiopia saysocon shaki kuma jiro waydumi inshaa alaahna waynu guulaysan bi idnilaah aan guul gobanimo xornimo inshaa alaah
CWXO guulaysta guullana ha idinla jiro!
Ilaahay haydin guuleeyo waad guulaysanaysaan insha allah
Halkaa kasii wada waxad tihiin kuwa aan ku dhaarano ee mar walba hor taagan dugaaga horarka ah ee boobka kawada dhulka hooyo gool iyo gobonimo
Viva ogadenia says:
Mansh’allah hal kaa ka siwada insha’allah waynu gadhi gusha umada ree ogadenia na waxan ushegaya inu yahay kani isku daygi ugu danbeyay e gumaysiga madaw